Khibrad Riyadii Reer Yurub: 5 Dalalka Waa Inay Booqdaan | Save A tareenka
Home > Safarka Iceland > Khibrad Riyadii Reer Yurub: 5 Dalalka Waa Inay Booqdaan
Tilmaamaha Safarka Gawaarida, Safarka tareenka, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen safarka Giriigga, Tareen Safar Talyaani, safarka Europe, Safarka Iceland
Yurub waa qaaradda hormoodka ka ah ee firfircoon, lagu noolaan karo, iyo magaalooyin casri ah oo lagu raaxeysto. Waxaa jira waxyaabo badan oo yaabab dhismeedka ah, matxafyada, iyo makhaayadaha waddan kasta oo Yurub ah oo aad ka fekereyso. Nolosha habeenkii iyo muuqaalada cuntada ee qaaradda oo dhan ayaa ka galay kaalinta labaad. Xayawaanka duurjoogta ah iyo soojiidashada dabiiciga ah ee qaaradda ayaa labaduba ah kuwo soo jiidasho leh oo sahlan in la helo. Sababtoo ah cunsuriyadda EU iyo shabakadaha tayada sare leh ee ku baahsan qaaradda, Way u fududahay safarayaasha wadada in ay sahamiyaan qaarada oo dhan hal mar oo kaliya. Si aad ula kulanto riyada yurub waxaad isticmaali kartaa gaari kiro ah ama gaadiidka dadweynaha.
Ma u Baahan Tahay Barakac (Shatiga Wadista Caalamiga ah) Si Aad Ugu Waddo Yurub?
Well, waddamada qaarkood sida Talyaanigu waxay u baahan yihiin wadayaasha ajaanibta inay yeeshaan liisanka darawalnimada ee caalamiga ah caddeyn u ah aqoonta wadista. Way fiicantahay inaad keento liisanka xitaa wadamada aan dalban sababtoo ah waxaad ubaahan kartaa si aad ugu qanciso wakaaladaha maxalliga ah ee kirada baabuurta iyo booliska taraafikada inaad tahay darawal wanaagsan. Sidoo kale, ka hor inta u safrin, ka hubi CDC-da si loo hubiyo in meelaha aan ku falanqeyneyno ee halkan ku yaal aanu saameyn ba'an ku yeelan faafka. Iyadoo taas maskaxda, waa tan liiska 5 waa inaad booqataa wadamada yurub.
Dadka tagay Santorini waxay aaminsan yihiin in magaaladu tahay meesha ugu jacaylka badan Yurub kaliya ma aha ee adduunka oo dhan. Waxay kufiican tahay kuwa is guursaday ee raadinaya a safarka Malabka. Waxaad ku soo jiidan doontaa aragtida caleenta cajiibka ah iyo qorrax dhaca. Waad fuuli kartaa, safar dalxiis, ama galab nasasho leh xeebta fulkaanaha madow ee magaalada. Hadaad dhalada jeceshahay, waxaad jeclaan doontaa sampple raagay degaanka ay weheliyaan Badda Dhexe. Santorini waa alsidaa darteed waxay hoy u yihiin qaar ka mid ah hudheelada raaxada ee Griiga.
2. Khibrada Riyada Yurub: Lake Como, Italy
Harada Como waxay caan ku tahay noocyadeeda kala duwan ee aan dhamaadka lahayn ee villa iyo tuulooyinka quruxda badan, cuntooyinka macaan (ma adigaa, Pizza Talyaani ah?), iyo meelaha sawirada cajiibka ah, kuwaas oo dhammaantood ay ku xiran yihiin adeegyada doomaha maalinlaha ah. Hadaad heysato waqti iyo doolar dheeri ah oo kuubaahan, waad kiraysan kartaa mootada waxaadna u raaci kartaa magaalada yar ee Bellagio. Siyaabo kale, sidoo kale waad lugeyn kartaa ama isticmaal a baaskiil ku shaqeeya gaas kuna raaxee aragtida quruxda badan adigu kaligaa. Cimilada halkan waa mid la yaab leh sanadka oo dhan iyo sababta oo ah dhaqanka dib u dhaca gobolka (ma jiraan dalxiisayaal badan), waxaad heleysaa fursada ugu fiican ee aad kaga jabi karto culeyska iyo mooska noloshaada caadiga ah. Lake Como sidoo kale waxay leedahay jawi jacayl oo ku saabsan bisha Malabka.
Florence oo ku socota Como Tareen
Milan Oo La Imanaysa Tareen
Turin to Como Tareen Tareen
Genoa Oo La Iman Doono Tareen
Caasimadda Iceland ee Reykjavik waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu fiican Yurub ee socdaalka, sababo badan awgood. Hadaad taariikhda ku cajabisay, waxaad ku jeclaan doontaa Reykjavik madxafyada quruxda badan ee hodanka ah ee ay ka mid yihiin Matxafka Badda ee Viking, Matxafka Einar Jonsson, iyo Matxafka Fanka. Magaalada caasimada ah sidoo kale waxaa ku hareereysan soojiidasho la yaab leh, taasoo ka dhigaysa dekedda ugu wanaagsan ee laga soo galo booqdayaasha caalamiga ah. Waxaad arki doontaa oo aad la kulmi doontaa tan oo ah waxyaalo yaab leh oo juquraafi ah oo ay ku jiraan dhibcaha lafaha, biyo-dhacyo, iyo Lagoon Buluug ah. Dhagaxyada, glaciers, xeebaha bacaadka ah, iyo volcanoes sidoo kale waxay qeexaan xaafadaha Reykjavik.
Wixii alaab cunto ah, waxaad jeclaan doontaa inaad dhadhamiso noocyada kala duwan ee cuntooyinka dhaqanka ee Iceland ee meelaha sida Sushi Samba iyo Baejarins Beztu Pylsur. Hadaad jeceshahay duurjoogta badda, waad tagi kartaa nibiriga daawashada dekedda hore ee Reykjavik, guriga in ka badan 20 noocyada nibiriga kala duwan. Waxa kale oo aad arki kartaa hoonbarrooyinka, puffins, iyo boorashka, ka mid ah duurjoogta kale ee badda.
4. Khibrad Riyadii Reer Yurub: Prague, Czech Republic
Dalxiisayaal badan ayaa jecel Prague dhacdooyinkeeda cajiibka ah, laga soo bilaabo carwooyinka fasaxa illaa maalin-socodyada sannad-sannadeedka. Qaar ka mid ah dhacdooyinka xiisaha leh ee ay tahay inaad ku raaxeysato markaad joogtid Prague waxaa ka mid ah Bohemian Carnevale markaad booqato magaalada Febraayo, ama Bandhigga Beerka Czech markaad booqanayso May. Nolosha habeenkii halkan sidoo kale waa sababta ugu weyn ee dadku u soo booqdaan, leh naadiyada Jazz iyo kuwa kale music live xukuma goobta madadaalada. Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Prague sanadlaha ah waa mid ka mid ah waxyaabaha madadaalada Prague. Waad damaashaadi kartaa habeenkii oo dhan amniga magaalada oo aad loo adkeeyay awgeed. Hadaad jeceshahay fanka iyo taariikhda, booqasho ku tageysa Matxafka Mucha ama Matxafka Kafka ayaa kuu samayn doonta khiyaamada.
5. Khibrada Riyada Yurub: Paris, France
Tan oo caan caan ah, fursadaha wax iibsiga aan dhamaadka lahayn, noocyo badan oo cunto macaan ah, taariikhda hodanka ah, iyo uruurinta farshaxanka, iyo sidoo kale jardiinooyin heer caalami ah iyo jardiinooyin ka dhigaya Paris inay ka soo dhex muuqato dadka. Qaar ka mid ah astaamaha caanka ah ee aad u baahan tahay inaad aragto ugu yaraan hal jeer inta aad nooshahay waxaa ka mid ah The Eiffel Tower, Basilica Xurmaysan, Arc De Triomphe, Matxafka Louvre, iyo The Palais Garnier. Haddii aad tahay qof jecel dukaamaysiga, waxaad jeclaan doontaa inaad xoqdo garbaha dharka leh ee ugu sarreysa reer Paris ee Rue Du Commerce, Boulevard Saint Germain, iyo raaxo kale jidadka shopping. Iyo hadaad fanka jeceshahay, waxaa jira uruurin farshaxan oo kaladuwan oo ku wareegsan Paris si loo tijaabiyo, oo uu ka mid yahay Musee dOrsay, Musee National Picasso, iyo Musee du Quai Branly.
Yurub waligeed kama maqna magaalooyinka “liiska baaldi” iyo magaalooyinka dalxiiska. Dhammaan waxay kuxirantahay miisaaniyadaada, waqtiga, iyo ujeedada booqashada. Liiskani wuxuu kaliya u furi doonaa albaabada si aad u sahamiso meelaha ugu neefta badan qaaradda.
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonnaa inaan kaa caawino qorsheynta safarka 5 Wadamada Riyoonaya In Europe. Safarka tareen ee guud ahaan Europe waa fiican in lagu safro tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka “Riyada Yurub: 5 Waa Inay-Booqdaan Dalalka Ku Yaala Yurub ”boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperiencing-european-dream-must-visit-countries%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa luqadaha / fr si / es ama / de iyo in ka badan.
riyo riyooday Yurub Geenyo MustVisitCountriesInEurope SafarkaCar travelbytrain SafarkaCzechRepublic travelfrance travelitaly
Emma waxay lataliye ahaan ula shaqeyneysaa shirkado dalal kala duwan ka socda. Shaqadeedu waxay u baahan tahay safarka inta badan inay xiriir toos ah la yeelato lamaanayaasheeda shaqada, maadaama safarku yahay hiwaayaddeeda waxay ka dhigeysaa shaqadeeda mid kaamil ah. Waxay sidoo kale jeceshahay qorista waqti ka waqti inta badan maqaallada la xiriira safarka, laakiin sidoo kale caafimaadka iyo qaab nololeedka. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa La xiriir Rebecca